राशि चक्रको बदलावले यी राशी लाइ मिल्छ लाभ ? – " सुलभ खबर "
राशि चक्रको बदलावले यी राशी लाइ मिल्छ लाभ ?
आर्थिक मामलाको हिसाबमा महत्वपुर्ण मानिने राशिचक्र फेरिएको छ । माघ २० देखि फाल्गुण २० सम्म हरेक राशिको चक्र फेरिएको हो ।यस अवधिमा केहि राशिका जातकलाई आर्थिक लाभको अवसर जुर्नेछ भने केहिले नोक्सान बेहोर्नु पर्नेछ । तसर्थ यस अवधिमा कुन राशिका लागी कस्तो रहन्छ आर्थिक अवस्था त्यस बारे जान्नु उपयुक्त हुन्छ ।
मेष राशिका जातकका लागी राशिचक्रले नकारात्मक असर पार्नेछ । यस अवसरमा धार्मिक बिषयमा निकै ठुलो खर्च हुने योग छ । केहि स्वास्थ्य र यात्रामा पनि खर्च हुने संभावना रहन्छ । तर यतिका खर्चका बावजुद घाटामा भने रहनु पर्दैन ।
वृष राशिका लागी यस पटकको राशिचक्र आर्थिक स्थितिमा राम्रो संभावना बोकेर आएको छ । भविष्य बनाउन, ब्यापार गर्न वा सफता पाउन यो उत्तम समय रहेको छ । यदि यस अघि नै कुनै कारोबार थाल्नु भएको छ भने त्यसैलाई प्राथमिकता दिनु लाभदायि हुन्छ ।
यस राशिचक्रमा मिथुन राशिका जातकका लागी मेहनत अनुसारको आर्थिक लाभ मिल्ने योग छ । शुरुवातमा खर्च बढे पनि आर्थिक स्थितिमा संकट भने आउदैन । साथै यो विस्तारै सुधार हुदै जान्छ । लगानीकर्ताका लागी फाल्गुणको दोश्रो साता उत्तम रहने छ ।
कर्कट राशिका जातकका लागी राशिचक्रले शुरुवातमा नै आर्थिक सबलता बनाउने छ । यो पुरा अवधिमा कुनै न कुनै माध्यमबाट धन प्राप्त भइरहन्छ । तर फाल्गुणको दोश्रो साताबाट भने अवस्था केहि कमजोर बनेर जानेछ । धन हराउन सक्छ ।
सिंह राशिका जातकलाई राशि चक्रमा महिला साझेदार राखेर आर्थिक कारोबार गर्ने उत्तम देखिन्छ । ब्यापारमा हुने घाटा पनि महिलाका कारण सुधार भएर जानेछ । तर भुलेर पनि यस अवधिमा बैंकबाट कर्जा भने नलिनु होला, यो घातक साबित हुनसक्छ ।
कन्या राशिका जातकलाई यस राशिचक्रले आर्थिक स्थितिमा मजबूत बनाएर राख्नेछ । तथापी स्थिति सधै तपाईको पक्षमा भने हुदैन । सूर्य छैठौ भावमा जाने भएकाले पनि पुरानो कर्जा वा उधारो तिर्न सकिने छ । तर नयाँ बचत भने हुनसक्दैन ।
तुला राशिका जातकका लागी राशिचक्रले खर्च बढाउने योग छ । आर्थिक स्थितिमा सुधार हुदैन बरु जोहो रकम सकिने योग छ । तर फाल्गुणको दोश्रो सातामा सम्पती खरीद गर्ने संभावना बन्नेछ । माघ महिनामा कुनै ठुलो कारोबार नगर्नु उत्तम हुन्छ ।
वृश्चिक राशिका ब्यक्तिका लागी राशिचक्रले सरकारी क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ गराउने योग छ । यस अवधिमा यि राशिका जातकले अत्यधिक लाभ प्राप्त गर्नेछन् । साथै हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्नु उपयुक्त रहेको छ । यो समय तपाईको हो भन्दा फरक पर्दैन ।
धनु राशिका ब्यक्तिका लागी राशिचक्रको अवधिमा आर्थिक सुधार हुनेछ । यस अवधिमा पारिवारिक सम्पति प्राप्त गर्न र पैतृक सम्पतिको भागिदार बन्ने योग छ । तर फाल्गुणको दोश्रो साताबाट यो समय अनुकुल भने हुदैन ।
बुध र शुक्रको युति मकर राशिको दोश्रो भावमा हुने भएकाले आर्थिक मामलामा निकै राम्रो परिणाम दिनेछ । अझ भनौ यस अवधिको शुरुवातमा नै राम्रो आम्दानी प्राप्त हुनेछ । तर खर्च गर्दा भने अवस्था र कारण अनुसार मात्र गर्नुहोला ।
कुम्भ राशिका जातकका लागी यस अवधिमा अधिक खर्च हुने योग छ । स्वास्थ्य समस्याका धन खर्च बढ्नेछ । साथै केतुको उपस्थितिले धन लाभको मौका गुम्नेछ । तर्सथ आर्थिक बिषयमा सजग रहनु निकै महत्वपुर्ण रहेको छ ।
मीन राशिका जातकलाई आर्थिक स्थितिमा उतारचढाव आएपनि धन लाभ हुनेछ । तर मंगल, दशम भावमा प्रवेश गर्नासाथ धनको कमी महसूस हुनेछ । तसर्थ एक सुचि बनाएर कुनै पनि शिर्षकमा सोहि अनुसार खर्च गर्नु उपयोगी हुनेछ ।